News Collection: म आफ्नो लिंग मोटो र बलियो पार्न चाहन्छु। यसका लागि कुनै औषधी छ कि ?
म आफ्नो लिंग मोटो र बलियो पार्न चाहन्छु। यसका लागि कुनै औषधी छ कि ?
म ३० वषर्ीय अविवाहित युवक हुँ। मेरो यौनेच्छा एकदम बढी छ। १२-१५ वर्षसम्म लगातार हस्तमैथुन गरे पनि अहिले आएर मैले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छु। सुत्दाखेरि आफैं वीर्यस्खलन भैसकेको केही दिनसम्म मैले मेरो लिंग अरू दिनको तुलनामा नरम र अलिकता लुलोजस्तो पाएको छु। यस्तो किन भएको होला ? म आफ्नो लिंग मोटो र बलियो पार्न चाहन्छु। यसका लागि कुनै औषधी छ कि ? अथवा अरू कुनै उपाय भए बताइदिनुहोला ?
यौन इच्छा किन बढी ?
यौनेच्छा राम्रोसँग हुन त सौभाग्य नै मान्नुपर्छ। यौनचाहना पनि सबै व्यक्तिमा एकनासको हुँदैन। कसैमा बढी हुन्छ त कसैमा कम। कुनै व्यक्तिमा यति नै यौनचाहना हुनुपर्छ भन्ने छैन। हुनुपर्नेभन्दा बढी यौनचाहना भएको स्थितिलाई excessive sexual desire भएको भनिन्छ, यसका लागि hyperactive sex वा hypersexuality शब्द प्रयोग गरिन्छ। यस्तो स्थिति चिकित्सीय दृष्टिकोणले ध्यान दिनुपर्ने गरेर बढी नै भएको हुनुपर्छ। कति यौनचाहनालाई चाहिँ बढी भन्ने कुरामा अझै पनि विवाद छ। एक व्यक्तिले सामान्य मानेको यौनचाहनालाई अर्को व्यक्तिले कम वा बढी मान्न सक्छ, तर कसैको दैनिक सामाजिक जीवन नै बिग्रने वा तनावपूर्ण हुने गरी यौन व्यवहार देखिन थालेको स्थितिमा भने यौनचाहना बढीको स्थिति भन्न सकिने कुरामा सबैजसो सहमत देखिन्छन्। साँच्चिकै यौनचाहना बढी हुँदा त्यसको उपचार गर्नुपर्छ। सम्बन्धमा आएका अप्ठयारा, यौन तथा व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो किन हुन्छ भन्न सजिलो छैन। यसका कमै मात्र शारीरिक कारण भेटिन्छन् र सम्भवतः हार्मोन वा मस्तिष्कमा आएका खराबी यस्ता कुराका कारण हुन्छन्। अन्य कतिपय स्थिति मनोवैज्ञानिक हुन्छन्। तपाईंले के आधारमा अत्यधिक यौनचाहना छ भन्ने मान्नुभएको हो, थाहा हुन सकेन, मेरो विचारमा यौनचाहना अनावश्यक रूपमा बढी भएजस्तो लाग्दैन। अर्को कुरा हस्तमैथुन गर्न किन बन्द गर्नुभयो बुझिएन, यो प्राकृतिक कुरा हो र यसले हानि गर्दैन।
सुत्दा वीर्य स्खलनले लिंग लुलो ?
यौनसम्बन्धी कुरा हामी बिउँझेका बेला मात्र होइन, निदाएका बेला पनि निरन्तर चलिरहन्छ। निदाएको बेलामा लिंग उत्तेजित हुनुका साथै यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको सपना देखिन्छ। यस्तो प्रायःजसो किशोरावस्थामा पहिलो पटक हुन्छ र यसले यौन विकास राम्रैसँग भएको संकेत गर्छ। यही क्रममा कतिपय व्यक्तिले यौन चरमसुख पनि पाउँछन्। बोलीचालीको भाषामा यसैलाई स्वप्नदोष भनिन्छ। अंग्रेजीमा भने wet dreams वा nocturnal emmisions जस्ता शब्दको प्रयोग यही अवस्थालाई वर्णन गर्न गरिन्छ। सामान्यतः प्रजनन प्रणालीले राम्रोसँग कार्य गर्न थालेपछि वीर्यको पनि उत्पादन गर्न थाल्छ र यसले स्वाभाविक रूपमा बाहिर निस्कने बाटो खोज्छ। अर्कातिर यौनचाहना प्रबल हुन थालेपछि एक किसिमको यौन तनाव बढ्न थाल्छ, जसलाई शान्त पार्न प्राकृतिक रूपमै यसले बाटो खोज्छ। यसरी यौनेच्छा पूर्ण रूपमा पूरा भएपछि यौनेच्छा पूरा गर्ने व्यग्रता कम हुन सक्छ, जसले लिंगको उत्तेजनामा प्रभाव पारेको हुनसक्छ। नत्रभने केही दिनसम्म यस्तो हुनुपर्ने कारण देखिँदैन।
लिंग मोटो र बलियो पार्न के गर्ने ?
लिंग एक विशेष अङ्ग हो र यो अङ्ग मानव शरीरको एक अङ्गका रूपमा मात्र नभै यसको सांकेतिक महत्त्व बढी छ। सन्तान उत्पादन गर्ने अङ्ग भएकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ। कतिपय व्यक्ति यसको आकार वा लम्बाइलाई पुरुषको 'व्यक्तित्व' वा भनौं उसको 'पौरुषत्व' सँगै जोडिएको मान्छन्। कतिपय व्यक्ति लिंगको लम्बाइ वा मोटाइ सामान्य भए पनि सानो भयो कि भनेर पीर-चिन्ता गर्छन्। यस्तो स्थितिलाई अंग्रेजीमा Small Penis Syndrome पनि भनिन्छ। तपाईंले साह्रै सानो भने पनि नाप दिनुभएको छैन। लिंगको लम्बाइ तथा मोटाइ व्यक्तिअनुसार एकदमै फरक-फरक हुन सक्छ। कसैको लामो हुनसक्छ भने कसैको छोटो। त्यसैगरी कसैको मोटो हुनसक्छ भने कसैको पातलो। लिंग बढाउन संसारमा अनेक उपाय प्रयोग गरिएको पाइन्छ। त्यसमध्ये एक लिंगको कसरत तथा हातैले तन्काउने विधि हो। अर्को उपाय तौल वा यन्त्रको सहायताले तन्काउने विधि हो। अर्को तरिका पम्पको प्रयोग हो। यी सबैको प्रभावकारीतामा प्रश्नहरू छन्। शल्यचिकित्सा अर्को महत्वपूर्ण उपाय हो र यसका पनि अनेक प्रकार छन्। यस्ता शल्यक्रियापछि नाप बढ्ने कुरा र यौन सक्षमतामा मिश्रति नतिजाहरू आएका छन्। तपाईंले अपेक्षा गरेजस्तो सजिलो घरेलु उपाय उपलब्ध नहुन सक्छ।
के सानो लिंग भए यौनसम्पर्क नै गर्न सकिँदैन ?
तपाईंले किन लिंग मोटोे र बलियो पार्न चाहनुभएको हो, थाहा भएन। सामान्यभन्दा सानो लिंग भए पनि यौन सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यदि तपाईंले सजिलै हस्तमैथुन गर्न सक्नुहुन्छ भने यौनसम्पर्क राख्न पनि गाह्रो नपर्ला। यो कुरा भने पक्कै हो कि कुनै पनि अन्य व्यक्तिलाई जस्तो साथीको सहयोगका साथै आत्मविश्वासको आवश्यकता पर्छ। त्यसैगरी यौन सुख दिन वा सायद लिंगको नापभन्दा अन्य कुरा बढी महत्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ।
जहाँसम्म आफ्नो महिला यौनसाथीलाई यौन सुख दिन प्रदान गर्ने क्षमताको प्रश्न छ, त्यो पनि मजाले सकिन्छ। महिलाको यौनसंवेदनशील अङ्ग वा भाग योनिको भित्री तहमा केन्दि्रत हुँदैन। प्रायः सबैजसो महिलाको यौन सुखको केन्द्र भगांकुुर हो। महिलाले यही भगांकुरकोे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष घर्षणबाट महिलाले यौन आनन्द प्राप्त गर्छ। यो भगांकुुर बाहिरतिरै हुन्छ। फेरि सम्पूर्ण योनिको लम्बाइ -४ इन्च) लाई हेर्ने हो भने यसको भित्री भाग होइन कि बाहिरतिर एकतिहाइ भाग नै विशेष रूपमा यौन संवेदनशील हुन्छ र साधारणतया छोटो भनिने लिंग पनि आफ्नो यौनसाथीलाई यौनसुख दिन पुग्ने नै हुन्छन्।
हुन सक्छ, कतिपय महिलालाई ठूलो आकारको लिंगप्रति आकर्षण होला तर नापकै आधारमा बढी यौन आनन्द पाउनेचाहिँ होइन। योनि तथा भगांकुुरबाहेक महिलाको यौनाङ्ग क्षेत्रमा रहेको ठूलो तथा सानो भगोष्ठहरूका साथै अग्रभागमा रहेको mons veneris (जहाँ यौनकेशहरू पाइन्छ) भागहरू अनि स्तन तथा शरीरका अन्य भाग पनि यौन संवेदनशील हुन्छन्। यी अङ्गका घर्षण वा मर्दन पनि यौनसम्पर्कको अन्तरङ्ग क्रियाकलाप हुनसक्छ।